Tournoi Pangalanes 2018 : Nahazo fandresena fanintelony ny Ascut -
AccueilSongandinaTournoi Pangalanes 2018 : Nahazo fandresena fanintelony ny Ascut
Tournoi Pangalanes 2018 : Nahazo fandresena fanintelony ny Ascut
Fandresena telo, faharesena iray. Izay no vokatra azon’ny Ascut Atsinanana, hatreto, tao anatin’ny efatra andron’ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny Tournoi Pangalanes 2018 eo amin’ny taranja basikety, sokajy N1A lehilahy. Fifaninanana mizotra amin’izao fotoana izao aty Manakara, Faritra Vatovavy Fitovinany.
Ho an’ny andro fahefatry ny fifanintsanana, nandavo ny TMBB Analamanga tamin’ny isa mazava, 95 noho 81, ny Ascut Atsinanana. Niady tanteraka hatrany am-boalohany ny fihaonan’ny roa tonta tamin’izany. Nitarika tamin’ny isa hatrany ry Tolotra sy Ibrahim, ary Did’s sy ny namany avy amin’ny Ascut. Na izany aza anefa, niezaka ny nanohitra, ary nanenjika hatramin’ny farany ny TMBB saingy hita ho nanatombo tamin’ny traikefa ity ekipa sangany avy amin’ny Faritra Atsinanana ity. Noho izay indrindra, dia nivoaka sempotra ity solontenan’Analamanga iray ity ka tsy tafavoaka.
Teo amin’ny fihaonan’ny Cosfa Analamanga sy ny GNBC Vakinankaratra indray, niady ihany koa ny lalaon’ny roa tonta saingy, tsy nahatohitra ny ekipan’ny Zandarimariam-pirenena avy any Vakinankaratra ny ekipan’ny miaramila. Lavon’ny GNBC tamin’ny isa 83 noho 77 mantsy ny Cosfa tamin’izany.
Toraka izany koa no nanamontsanan’ny ASCB Boeny ny ekipa voafantin’i Manakara, mpampiantrano. Narodan’ny ASCB tamin’ny isa mavesatra, 89 noho 50, ny ekipan’i Tan avy ao Manakara. Nampiseho ny fahaiza-manaony sy ny tanjany ry zareo avy any Boeny hany ka tsy nahatohitra azy ireo mihitsy i Manakara.
Hatreto, mbola ny GNBC Vakinankaratra no mitana ny lohany vonjimaika amin’ny filaharana ankapobeny, arahin’ny Ascut Atsinanana eo amin’ny laharana faharoa. Mitana ny laharana fahatelo kosa ny ASCB. Izany hoe, samy nahazo fandresena telo, ary resy indray mandeha avy ireo ekipa telo voalohany ireo.